သုတ်ရည်ယိုစိမ့်မှုကောဘယ်လိုလဲ။ - Porn On Brain - ယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းအချက်အလက်
တစ်ခါတစ်ရံည့်သည်များသည်မလိုလားအပ်သောသုတ်ရည်ယိုစိမ့်မှု (ပုံမှန်အဆင့်ထက် ကျော်လွန်၍) ကိုသတင်းပို့ကြသည်။ ဤသည်ကို rebooting မတိုင်မီသို့မဟုတ် rebooting ၏အစောပိုင်းအဆင့်စဉ်အတွင်းဖြစ်ပျက်။ အကျွမ်းတဝင်မရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်မငြိမ်သက်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖိုရမ်များအတွက်ဘုံခေါင်းစဉ်ဖြစ်သောကြောင့် YBOP သည်မှတ်ချက်အနည်းငယ်ပေးခဲ့သည်။
ငါသုတ်ရည်ယိုစိမ့်မှု 'ကိုလည်းသတိပြုမိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်အတွင်းခံအဝတ်အစားများသည်သဘာ ၀ ယိုစိမ့်မှုပမာဏအနည်းငယ်မှနေ့စဉ်ညစ်ညမ်းနေသည်။ ငါဒါကိုသဘာဝပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ Flatline လက္ခဏာတစ်ခုလို့မြင်တယ်။ ယခင်ကဤသုတ်ရည်ယိုစိမ့်မှုဖြစ်စဉ်သည်ဘဝကိုမခံစားရသည့်ခံစားမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်ကိုလှောင်ပြောင်နိုင်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည်ပိတ်မိနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိုသာသောသူဖြစ်သော်လည်းမထွန်းကားနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်သန္ဓေသားလောင်းလိုခြင်းနှင့်ဤ“ လိုအပ်ချက်” ကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက် libido နှင့်စိုက်ထူခြင်းမရှိခြင်း ဟူ၍ ကျွန်ုပ်အနက်ဖွင့်ပေမည်။
ညစ်ညမ်း / တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရက်ပေါင်း ၉၀ အထိရှောင်ကြဉ်ပြီးတဲ့နောက်ငါဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးထိခိုက်လွယ်တယ်ဆိုတာကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင်သုတ်ရည်ယိုစိမ့်တော့တယ်။ ငါဟာအမျိုးသမီးတွေကိုအများဆုံးစိတ်ဝင်စားပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကြိမ်နှုန်းနည်းနည်းနဲ့ငါ့ရဲ့စမ်းသပ်မှုတွေအတွင်းမှာသူတို့နဲ့အိပ်ရာဝင်ခဲ့ရတယ်။
အတိတ် 'အသက်မဲ့လိင်တံ' ကိုရဖို့ ၃ ပတ်လောက်တစ်လလောက်ကြာခဲ့တယ်။ ငါသုတ်ရည်ယိုစိမ့်မှုကိုလည်းအပြင်းထန်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ မင်းထိတ်လန့်မသွားဘူးဆိုရင်။ အဆိုးဆုံးအပိုင်းကငါ့သက်မဲ့လိင်တံပဲ။ ငါစိုက်ထူရပေမယ့် flaccid ပြည်နယ်ထဲမှာအမွေးအတောင်ကဲ့သို့အလင်းခံစားရနှင့်အနည်းငယ်ကျုံ့။ ယနေ့တွင်တိုးတက်လာသည်။ ငါ၏အစိုက်ထူနေဆဲ 90% ခန့်နေဆဲစိုက်ထူခြင်းနှင့် 100% နံနက်သစ်သား။
ဆိုးကျိုးများ - ရူးသွပ်နေသော ဦး နှောက်မြူ၊ ငါစာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်နေစဉ်၊ ဆီးသွားသည့်အခါ Semen ယိုစိမ့်နေသည်။ ချစ်တယ်
ငါရှိခဲ့သည့်သုတ်ရည်ယိုစိမ့်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ - ကျွန်ုပ်၌လိင်အတွေးမရှိခဲ့ပါ၊ စိုက်ထူခြင်းတောင်မှမရှိခဲ့ပါ။
ဒီအဆင့်စဉ်အတွင်းငါသုတ်ရည်ယိုစိမ့်ကြုံတွေ့နှင့်အများအားဖြင့် flatline ။ သို့သော်သူတို့အား 21 ရက်အကြာမှာကျွန်မနောက်ကျောကိုငါ့လိင်စိတ်ခဲ့နဲ့ကျွန်မကိုလည်းမကြာခဏနံနက်သစ်သားရှိခြင်းခဲ့သည်။
သူကပြောကြားသည်မှာရပ်တန့်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာအူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုများတွင်“ သုတ်ရည်ယိုစိမ့်ခြင်း” မဟုတ်တော့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုနည်းတူစွာပင်ထူးဆန်းသည်မှာငါနောက်ဆုံးည၌သုတ်ရည်ယိုစိမ့်မှုအနည်းငယ်ရှိသည်။ ငါတကယ်ခက်ခဲ့ပေမယ့်ကြောင်းဖွင့်။ အဖုံးများကိုချိန်ညှိရန်ကျွန်ုပ်သည်အောက်သို့ဆင်းပြီးရေသို့မဟုတ်ဆီးမဟုတ်သောအရာတစ်ခုကိုခံစားခဲ့ရသည်။
ဒါဟာတကယ်ကိုအံ့သြစရာပါပဲ၊ ဒါပေမယ့်သင်ရှောင်နေရင် lube ကိုသုံးပါ၊ စွဲမထားပါက orgasms သည် PMOing ထက်တစ်နေ့လျှင် ၄ ကြိမ်ပိုကောင်းသည်ဟုခံစားရသည်။ ကျွန်ုပ်၏သုတ်ရည်ယိုစိမ့်မှုသည်ရပ်တန့်သွားပြီဟုယုံကြည်သည်။ ၎င်းသည်နောက်ထပ်ကောင်းသောလက္ခဏာဖြစ်သည်
(၂ လညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံ၊ ၂ မီတာ) ဆီးသွားပြီးနောက်ဆီးယိုစိမ့်မှုမရှိကြောင်းသတိပြုမိသူမည်မျှရှိသနည်း။ ဒီပေါက်ကြားမှုကိုဘယ်သူမှရှင်းပြနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါက Urethra ရဲ့အသွင်သဏ္ဌာန်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဆီးသွားပြီးနောက်ဆီးသွားပြီးနောက်နို့ကိုနို့ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်ကြွက်သားတွေကိုအားဖြည့်ပေးနိုင်တယ်။ ဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ပါစေငါအသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်ကတည်းကမျှမျှတတယိုစိမ့်မှုဘယ်တော့မှမရပ်နိုင်ဘူး။ အခုငါဒီပြproblemနာကိုအတော်များများပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ အခြားမည်သည့် PMOers မှ ၀ န်ထမ်းများက ၄ င်းတို့အတွက်လည်းမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်လျှင်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်။ ဆီးထဲမှာစီးဆင်းမှုကိုပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်သူကအာရုံစူးစိုက်နေတယ်။ တကယ်ရိုးရှင်းလို့ရမလား။ သို့ဆိုလျှင်အဘယ်သူမျှမပြောရန်မစဉ်းစားခဲ့သလဲ
ငါကတစ်လကိုအကြိမ် ၂၀ လောက်လိုလိုပထမလဒါမှမဟုတ်ဒီလောက်ဆိုးတာပဲ။ ကံကောင်းတာကကျွန်မရဲ့ဆေးရုံကငါ့ဘောင်းဘီတိုတွေအစားငါ့ရဲ့ဆီးအိမ်ကိုတိုက်ရိုက်သွားတယ်။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်သုတ်ရည်အများကြီးမချတော့သူတို့နောက်ဆုံးတော့ရပ်လိုက်တယ်။ ထူးဆန်းတဲ့ခံစားမှု! ၎င်းသည်ထူးဆန်းသောသဘောတူညီမှုဖြစ်ပြီးလုံးဝအတင်းအဓမ္မလုပ်ခိုင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါထွက်လာပြီလို့ခံစားရပေမယ့်ကျွန်တော့်လိင်တံရဲ့အတွင်းပိုင်းကချက်ချင်းဆုပ်သွားတယ်။ ထိုအခါဆီးအိမ် sphincter ဖြေလျော့ပေးခြင်းနှင့်ငါဆီးအိမ်ထဲသို့ဝင်သောအခါငါကခံစားရတယ်ခံစားရတယ်။ နှစ် ၁၀၀ ရှိပြီဖြစ်သောဆေးစာအုပ်တစ်အုပ်က၎င်းကိုဆီးကျိတ်ကင်ဆာအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့သင်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပေးနိုင်မလားမသိဘူး။ ယောက်ျားများစွာသည်အူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုအတွင်းတွင်ရိနာစွဲကြသည်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ MOing စတင်ကတည်းက (၁၂-၁၃ နှစ်၊ ယခု ၂၆ နှစ်) ကျွန်ုပ်သည် PC ကြွက်သားများနှင့် PMO ကိုအမြဲတမ်းလိုလိုအမြဲရှိနေတတ်သည်။ အဆက်မပြတ် စာချုပ်ချုပ်ဆို ထိုအခါငါ O. နီးပါးရှိရာအမှတ်မှအနားသတ်လိမ့်မယ်ထိုအခါငါတိုက်တွန်းပျောက်ကွယ်သွားခံစားခဲ့ရသည်အထိငါပြီးအောင်သည်အထိကြောင်းဖက်ရှင်အတွက်ဆက်လက်ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ရပ်တန့်။ အမှန်ကတော့, ငါအမြဲတမ်းအစွန်း) ။ ကျွန်ုပ်အဆက်မပြတ်နှိုးဆွခြင်းမရှိလျှင်စိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အခက်တွေ့နေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်၏တင်ပါးဆုံတွင်းကြွက်သားများကိုတင်းကျပ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိုးဆွခြင်းရပ်တန့်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကြွက်သားများကိုဖြေလျှော့ခြင်းပြုသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုကိုဆုံးရှုံးသွားသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည် Seminal ယိုစိမ့်မှုနှင့် PE နှင့်စိတ်သဘောထားရှိခြင်းတို့ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ ကိုယ့်ငါကို PC ကြွက်သားအဆက်မပြတ်ကျုံ့ထံမှ ED နဲ့ကျွန်မ PE များသဘောပေါက်လာတယ်။ မဆိုအကွံဉာဏျ?
Yup, စုံတွဲတစ်တွဲဆေးရုံရှိခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းပါတယ်
သုတ်ရည်ယိုစိမ့်အပေါ်, r / nofap ချည်
ယောက်ျားတွေပြောတာက reboot ဆက်ဖြစ်နေတာနဲ့အမျှဒီလက္ခဏာဟာတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီလို့ပြောတယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်များကသိပ္ပံပညာကသိပ္ပံပညာကိုမထုတ်လုပ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် porn ဟာဖြစ်ရပ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ သုတ်ရည်လွှတ်မှုအကြိမ်ရေများလာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေတဲ့ရောဂါလက္ခဏာအသစ်တွေပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။
ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များ (ကဲ့သို့သောအားလုံး) ကဲ့သို့ပင်သန္ဓေတည်မှုတစ်ခုသည်ကဏ္ sem အသီးသီးမှထုတ်လုပ်သော seminal output၊ seminal အရည်အသွေး၊ output အချိန်ကိုက်၊ volume၊ volume၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ယောက်ျားများသည်မကြာခဏဆိုသလိုမကြာခဏမဟုတ်ဘဲများသောအားဖြင့် ၄ င်းတို့ထဲမှအနည်းငယ်မျှသာ - လိင်တံမှအကြောများစွာ (နှင့်အချို့သောလူကြီးများ) တွင်ရှိသည်။ ဤအရာသည်သင်ရည်ညွှန်းသည့်သို့မဟုတ်ပြောဆိုနေသည့်အသုံးအနှုန်းများတွင်ယိုစိမ့်မှုမဟုတ်ပါ။ အဲဒီအစား, အားလုံး seminal အရည်နှင့်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးပြင်ပ sphincter မှ Proximity ထုတ်လုပ်ကြသည်မဟုတ်။ သို့သော်အားလုံးသည်အတွင်းပိုင်း sphincter ကိုအဝေးမှသို့မဟုတ်ပြင်ပတွင်ထုတ်လုပ်ကြသည်။
အဘယျသို့သောသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်အပြင်ပြင်ပအလင်းနှင့်ထိတွေ့နိုင်သည်ကိုအထီးမှအထီးအထိပမာဏ (ပမာဏ) ကွဲပြားသည်။ လက်တွေ့ကျကျဘာမျှမကနေအနည်းငယ်ပေါက်ရန်။ ပြီးတော့တစ်နေရာရာမှာအဲဒီ့ထက်ပိုပြီးထုတ်လုပ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာသေချာတယ်။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်သုတ်ရည်လွှတ်မှုဆိုသည်မှာမည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုလိင်အင်္ဂါဖြတ်တောက်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်စေခြင်းသို့မဟုတ်လျော့နည်းစေခြင်း၊ သို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်မှု၏တူညီသောပမာဏသည်သုက်လွှတ်ခြင်းမှသုက်လွှတ်ခြင်းအထိ (သို့မဟုတ်အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ) ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုယူဆစရာအကြောင်းမရှိပါ။ အထီးအသက်အရွယ်အဖြစ်တစ်နှစ်မှတစ်နှစ်) ။
ထို့အပြင်အမှန်မှာသုက်လွှတ်မှု၏ရှုထောင့်အားလုံး၊ သုက်ပိုးလှုံ့ဆော်ခြင်းသို့မဟုတ်သုတ်ရည်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်တံခါးခုံအားလုံးသည်ယောက်ျားတိုင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသည်၊ ယောက်ျားတိုင်းတွင်အချိန်နှင့်အမျှကွဲပြားသည်။ မည်သည့်အထီးမဆို။ ထို့အပြင်ဒါ့အပြင် (ပြောရန်) များစွာသောအထီး, ဤသည်အတော်လေးငယ်ရွယ်အထီးများအတွက်လက်တွေ့အထူးသမှန်ပေမယ့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်မဟုတ်, မကြာခဏတင်ပါးဆုံတွင်းပိတ်ဆို့မှုကိုလက္ခဏာများနှင့်လက္ခဏာတွေအမျိုးမျိုးကွဲပြား, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မဟုတ်, ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်သုတ်ရည်လွှတ်ကနေ (သေချာပေါက်ပျက်ကွက်အော်ဂဇင်) ။
ဤရွေ့ကားအပြာရောင်ဘောလုံးများ syndrome ရောဂါ, prostatodynia, ဆီးကျိတ်ကင်ဆာပိတ်ဆို့ခြင်း, prostatitis အဘို့အအန္တရာယ်, perineal အဆင်မပြေ (ဖိအား, မီးလောင်ရာ), dysuria, terminal ကို dysuria, defecation နှင့်အတူ perineal နာကျင်မှုသို့မဟုတ်အခြား pelvic ကြမ်းပြင်ကြွက်သားကိုင်တွယ်တိုးမြှင့်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤရောဂါလက္ခဏာအချို့သည်မခံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နိုင်ပြီးအနည်းဆုံးအားနည်းနေနိုင်သည်။ တနည်းကား, ယောက်ျားတိုင်းနှင့်မိန်းမတိုင်း - ကွဲပြားခြားနားသည်။ အများစုသည်၎င်းတို့၏မျိုးရိုးဗီဇပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေများအတွက်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအနိမ့်အမြင့်သတ်မှတ်ချက်အတွင်းတွင်ကျရောက်နိုင်သည်။
[မိမိဆရာဝန်နှင့်သွားပြီးသည့်နောက်] တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကနာတာရှည်ဆီးကြိတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်က deuce ကိုဖယ်ထုတ်သည့်အခါတိုင်းမှထွက်လာသော poo သည်သင်၏ဆီးကျိတ်ကိုဆန့်ကျင်။ သွေးကြောယိုစိမ့်မှုဖြစ်စေသောသင်၏ဆီးကျိတ်ရောင်ခြင်း (prostatitis) နှင့်တူသည်။ ငါသာမင်းဖြစ်ခဲ့ရင်မင်းရဲ့ဆရာဝန်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးမနက်ဖြန်ရက်ချိန်းယူလိမ့်မယ်။ ငါသူ့ကိုရိုးရိုးဆီးကျိတ်စာမေးပွဲလုပ်ခိုင်းလိမ့်မယ်။ ဟုတ်တယ်၊ သူကသင့်ရဲ့တင်းပါးကိုလက်ချောင်းနှစ်ချောင်းလောက်ကပ်ထားရမယ်။ ဒီစမ်းသပ်မှုကသင့်ရဲ့ဆီးကျိတ်ကြီးထွားမှုရှိမရှိကိုအတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤဖိုရမ်တွင်ဆီးကျိတ်ပြissuesနာနှင့်ပတ်သက်သောအသံမျိုးဖြစ်သည်။ ငါကိုယ်တိုင်မကြာသေးမီကပြည့်တန်ဆာလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ် သတင်းကောင်းကတော့ဆေးညွှန်းကိုငါပေးတယ်။ စာရွက်စာတမ်းကလအနည်းငယ်အကြာမှာအားလုံးကောင်းသင့်တယ်လို့ပြောတယ်။ အဲဒါအရမ်းကုလို့ရတယ်
သံသယအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆရာဝန်တစ်ဦးတို့ကဘယ်အချိန်မှာထုတ် check လုပ်ထားပါပြီ။